Maxkamadda Muqdisho oo xukun fulisay - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Maxkamadda Muqdisho oo xukun fulisay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 5 Febraayo, 2013, 14:01 GMT 17:01 SGA
Maxkamad ku taal magaalada Muqdisho ayaa hal sano oo xarig ah ku xukuntay haweeney sheegtay inay kufsadeen ciidandka dowladda Soomaaliya oo ay sheegtay inay been abuurtay warkaasi.
Cabdicasiis Cabdinuur Ibraahim weriyaha sanadka lagu xukumay
Weriye, Cabdicasiis Cabdinuur Ibraahim oo wareystay gabadha ayaa isna waxaa lagu xukumay hal sano oo xarig ah qeybtiisa oo ah inuu gacan ka siiyay abuurista sheekadaasi.
Labadooda ayaa lagu helay dambi ah inay aflagaaddo u geysteen dowladda Soomaaliya.
Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyay xarigga iyo maxkamadda.
Shalay ayaa waxa magaalada Muqdisho looga dhawaaqay olole lagu dagaallamayo kufsiga haweenka oo ay hoggaamineysay, Caasha Xaaji Cilmi oo ka tirsan baarlamaanka SOomaaliya , ahna xaaska Raiisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon.